Umuliso dacwaddeedii ku guuldarreeysatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Umuliso dacwaddeedii ku guuldarreeysatay
La cusbooneeyay onsdag 12 april 2017 kl 12.43
La daabacay onsdag 12 april 2017 kl 10.59
Xukunkii maxkamada shaqada
Umuliso Ellinor Grimmark, gar-yaqaan Ruth Nordström iyo sumadda maxkamadda shaqada. sawir: Umuliso Ellinor Grimmark, gar-yaqaan Ruth Nordström iyo sumadda maxkamadda shaqada.
Maxkamadda shaqada ayaa maanta go’aan diidmo ah ka gaartay kiis ay dacwad ugu gudbisay umuliso Ellinor Grimmark oo horay shaqooyin ay codsatay loogu diiday, maadaama ay sheegtay in aanay doonayn inay qayb ka ahaato howlo ay ka mid yihiin haweenka ilmaha laga soo rido.
Maxkamadda shaqada (AD) waxay go’aankeeda ku sheegtay in aan la takoorin.
"Maxkamadda shaqada ayaa sheegtay inay shuruudaha qaarkood yihiin kuwo uu wakhtigoodii dhammaaday, islamarkaana umulisadu ay caddeeyn wayday eedeeymaha qaarkood ", sida maxkamaddu qortay.
- Go’aanka maxkamadda sare ayaa hage u noqon doona mustaqbalka sida arrimahaan oo kale loo xalinlahaa, sida ay sheegtay Kavot Zillén oo ah doktoor ku taqasustay sharciga caafimaadka oo ka howl-gasha Jaamacada Stockholm.
Umuliso kale ayaa sugaysaa in la furo kiiskeeda, oo arrinkaan la mid ah.
Waxay ahayd gu’ga 2013 markii ay Ellinor Grimmark loo diiday shaqo xilliga xagaaga oo isbitaalka haweenka oo ku yaal Eksjö. Ma aysan doonayn in ay ka shaqeyso ilma-riddida sababtana waxay la xiriirtay diinta masiixiga oo ay aaminsanayd. Labo isbataal kale ayaa ku diiday in ay shaqaaleysiiyaan asbaabahaan owgood.
- Qofkasta xaq ayuu u leeyahay diintiisa u gaarka ah, laakin taasi sal uma noqonaysa in qofku ku kala doorta waajibaadka shaqada uu qabanaayo. Daryeelka caafimaadku waxuu ka duulaaya baahida bukaanka, ayuu yiri Anders Liif o ah agaasimaha shaqaalaha.
Ellinor Grimmark arrinka waxay dacwad uga gudbisay hayadda Wakiilka ka hortaga takoorka ( Diskrimineringsombudsmannen) oo ku soo warceliyay in kiiskeedu aanu la xiriirin arrimo takoor. Maxkamada degmada Jönköping ayaa sidoo kale aamisnayn in arrinkeeda la xiriiro arrimo takoor. Inkastoo kharashka maxkamada uu ku dhow yahay hal malyan ayay kiiska awooday in ay hore u sii wado.
Ekot oo horey u soo warisay inuu kiiskaan maalgaliyay kana dambeeyo ururka caalamiga ururrada diinta masiixiga u dooda magaciisana loo soo gaabiyo ADF - Alliance Defending Freedom (isku-tagga difaaca xorriyadda). Ruth Nordström oo ah Ellinor Grimmark qaareenkeeda waxay tiri in arrinkaan hadii ay maxkamda degmadu ku diido ay la tagi doonaan Maxkamada Sare ee Midowga Yurub.
Haddii ay haweenaydani ku guuleeysan lahayd kiiskan ayay saameyn wayn ku yeelan lahayd nidaamka shaqada ee umulisooyinka. Waxay u fududeyn lahayd in ay diidi karaan in ay ilma ka soo ridaan haweenka, hadii ay diintoodu ay ka soo horjeedo.